Ndị na -emepụta Scissor Lift & China Scissor ebuli Factory
Igwe ikuku Mkpa mkpịbụ ngwaahịa bụ isi na ụlọ ọrụ ikuku. Daxlifter Nwee nkwalite scissor dị elu maka ahịa ụwa.E nwere ụdị dị iche iche anyị ga-ewebata:
China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Lift with Leg Leg bụ ụdị mmelite sitere na crawler nke na -enweghị ụkwụ nkwado akpaka. Nke a ga -adabara ịrụ ọrụ na mkpọda ọkụ na ụfọdụ ebe ọrụ nwere olulu miri emi na ihe ndị ọzọ.
China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Na -ebuli ihe pụrụ iche maka ebe ọrụ na -adịghị mma, ihe nrụpụta ga -enye ezigbo enyemaka maka mbuli ahụ ka ọ gafee ihe mgbochi siri ike. t nwere ụkwụ nkwado akpaka
Igwe na-ebuli onwe ya mkpa mkpa bụ ngwa dị oke mma. Ndị ọrụ ahụ nwere ike kwụ ọtọ n'elu ikpo okwu iji chịkwaa ngagharị na iweli akụrụngwa. Site na ọnọdụ ọrụ a, ọ dịghị mkpa iwetu ikpo okwu ala mgbe ọnọdụ ọrụ mkpanaka ......
Igwe eji ebugharị mkpisi mkpanaka na-ebugharị aka kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ dị elu, gụnyere itinye akụrụngwa dị elu, nhicha iko na nnapụta dị elu. Ngwa anyị nwere usoro siri ike, ọrụ bara ụba, yana enwere ike imeghari na gburugburu ọrụ dị iche iche.
Ọdịiche dị n'etiti ebuli elu scissor hydraulic na -ebuli onwe ya elu na onye na -ebuli scissor elektrik bụ na onye na -eji sistemụ hydraulic eme ka wiil na -agagharị, onye ọzọ na -eji moto eletriki nke na -etinye na wiil iji mee ka mbuli ahụ na -aga.
1) Semi Electric mobile scissor lif, Ogwe aka na-ebuli ya bụ nke nwere akụkụ anọ dị elu nke manganese steel, na tebụl ya bụ efere efere ma ọ bụ blanket plastik na-adịghị amị amị iji hụ na ndị ọrụ agaghị amị n'elu tebụl. A kwadebere ya na njikwa njikwa countertop iji gbochie misoperation. Jiri cylinder hydraulic nke Seiko mere iji hụ na arụ ọrụ nke akụrụngwa niile. N'otu oge ahụ, ọdụ ụgbọ mmiri drain nke hydraulic cylinder nwere valvụ otu ụzọ iji gbochie okpokoro ịdaba n'ihi ọdịda tubing. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịkwanye akụrụngwa ahụ enyemaka eletrik ịkwaga. 2) Igwe mkpali na-ebuli onwe ya, Ngwa ahụ n'onwe ya nwere ike ịrụ ọrụ ije na ịnya ụgbọ ala, na-enweghị traction akwụkwọ ntuziaka, batrị na-enye ọkụ, na enweghị ike mpụga. Akụrụngwa dị mma ma na-agbanwegharị ịkwaga, na-eme ka ịrụ ọrụ dị elu dị mfe ma dịkwa mma. Ọ bụ ngwa ọrụ dị elu dị elu maka ịrụ ọrụ dị elu yana nchekwa dị mma nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. 3) Rough Terrain Scissor lif, akụrụngwa na-ebugharị onwe ya nwere ngwa zuru oke nke usoro nguzozi onwe ya na taya mba. . Ọ dabara adaba maka ọtụtụ ebe dị mgbagwoju anya na arụ ọrụ siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ala adịghị ahụkebe, apịtị apịtị, wdg. Ọ nwekwara ike rụọ ọrụ mbuli elu n'otu akụkụ. N'otu oge ahụ, anyị haziri nnukwu ikpo okwu na -arụ ọrụ na ibu buru ibu maka ya, nke nwere ike imeju ndị ọrụ anọ ma ọ bụ ise na -arụ ọrụ na tebụl n'otu oge.